Shiinaha Cadaadis xirantay warshad shabaggeedii iyo saarayaasha | Hongchang
Cadaadiska xirantay iyo shabaggeeda
Cadaadis iyo shabaggeeda xirantay waxaa soo saaray iyadoo la isticmaalayo cadaadis Haydarooliga si wada quful baararka dhaliyay. Waxay bixisaa taageero lateral fiican oo uu leeyahay nadiif ah, fiirin siman. Waxaa ma awoodo in ay taageeraan miisaanka xamuulka rogid.
Codsiga of steel shabaggeedii
Fadilmo, beerta The codsiga iyo codsiga la taaban karo of steel shabaggeedii
Marka la barbardhigo saxan midabyo badiso, qalabka birta leeyahay faa'iidooyinka soo socda: miisaanka iftiin, xoog sare, awoodda load-dhalista weyn, iyagoo dhaqaale ee qalabka, hawo iyo gelitaanka iftiin, fashion casriga ah iyo kuwa aan warqada iyo iyo ammaan, nadiifinta fudud oo loo xirxiro, isagoo adag oo waarta, iwm.
Steel shabaggeeda hubkaas ayaa loo isticmaalaa in: koronto, dhirta kiimikada, warshadda sifeeysa saliidda, bir iyo bir shuqullada, mil warqad, warshadaha dhismaha mashiinka, mils cement, injineernimada degmada, daawaynta bullaacadaha, dhirta daawada iyo warshadaha cunto.
steel heerarka shabaggeeda
Shiinaha YB / T4001.1-2007 (YB / T4001-1998)
Dhex Hot mideyso Standard
Shiinaha GB / T13912-2002
Hot-maquufin mideyso waa nooc ka mid ah galvanization.It waa habka daahan steel shabaggeedii leh daaha khafiif ah zinc, ag marayo biraha dhex qubeyska la shubay ah zinc macnaheedu dhumucdiisuna daahan waa 70 μ m marka baararka steel dhaxayn 3mm in 5mm in dhumucda.
Xirxirida bir iyo shabaggeeda
Guddiyada waa xidhmo hab ugu haboon ee gacanka by yahay ee fargeeto-wiishka ama Xadhig wiish: laba lumbers square waxaa lagu dhejiyay on sare iyo hoose ee xidhmada siday u kala horreeyaan. Lix ama afar handarraabbadeedii dheer M8 ama M10 dhex gasho iyada oo iridda qalabka iyo dhuujin darfaha up.For qalabka birta ah baararka dhalista qaro weyn 3mm ah, afar xabbadood oo steel xagasha waxaa lagu daray inta u dhaxaysa duruf square hoose iyo guddiga, si looga hortago in ka lahayo ku marka hoisting.Besides, Heerka baakadaha gaarka ah sida looga baahan yahay qofka macaamilka ah ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa.
Rakibaadda steel shabaggeedii
Waayo, rakibaadda, laba hab fiiriyey waxaa loo isticmaali karaa alxanka ama isticmaalaya clips koore, Waayo, goobaha rasmiga ah iyo non-saaro, qalabka steel waa maankiisa-welded in ay taageerto steel. Sida goobta waayo alxanka fadlan fiiri qorshaha hoose, At afarta gees oo guddi, bar ugu horeysay dhalista waa maankiisa-welded xubin taageero la min 3mm x20r Weld filet ah min dheer. clips koore, kaas oo ay leeyihiin faa'iidooyin sida aan wada baabbi'innay dhuxusha zinc oo si sahlan ay ka saareen, waxaa laga heli karaa. Guddi walba isticmaali doonaan ugu yaraan afar clips koore Waayo darfaha weyn doorbidayaa dhowr more clips waxaa loo isticmaalaa si uu u xaliyo si xubnaha taageerada la heli karo. Marka xulashada clips koore, fadlan tixraac jadwalka soo socda.
Previous: Cadaadiska welded iyo shabaggeeda
Aluminum Platform shabaggeeda
Nooca Bar Of Steel shabaggeeda
Dhismaha Waxyaabaha Steel shabaggeeda
Hablaha modeellada Platform shabaggeeda
Hablaha modeellada Steel shabaggeeda
Clips Waayo Steel shabaggeeda
Forces Steel shabaggeeda
Darka Steel shabaggeeda Platform
Cadaadiska Xarunta Weld Steel shabaggeeda
Xarunta Steel shabaggeeda
Xarunta Steel shabaggeeda Iyada oo ay midabyo badiso Steel Plate
Qalabka Steel xarunta Iyadoo Cabirada kala duwan
Cufan Steel shabaggeeda
Abuurtay Steel qalabka
Floor Steel shabaggeeda
Galvanized Nooca Bar Of Steel shabaggeeda
Galvanized la maro Steel shabaggeeda
Xarunta galvanized Steel shabaggeeda
Galvanized Steel shabaggeeda Panel
Galvanized Steel shabaggeeda Standard Size
Steel galvanized Miisaanka shabaggeeda
Culus oo Duty Steel Floor shabaggeeda
Culus oo Duty la maro Steel shabaggeeda
Culus-Duty Press-xirantay Steel shabaggeeda
Culus-Duty welded Bar shabaggeeda
Dhex Hot Xarunta galvanized Steel shabaggeeda
Hot galvanized Steel shabaggeeda
Waxaan Nooca Steel shabaggeeda
Aan joogto ahayn Steel shabaggeeda
Qufulan Steel shabaggeeda
Low Carbon serrated Steel shabaggeeda
Birta Bar shabaggeeda
Fudud Steel Bar shabaggeeda
Floor Platform galvanized Steel shabaggeeda
Cadaadiska Weld Steel shabaggeeda
PCV dahaarka Steel shabaggeeda
Ring-qaabeeya Steel shabaggeeda
Serrated galvanized Steel shabaggeeda
Serrated shabaggeeda Platform
Serrated Press-xirantay Steel shabaggeeda
Serrated Steel shabaggeeda la maro
Nooca serrated Steel shabaggeeda
Qaabeeyaan Bar shabaggeeda Round Birta iyo shabaggeedii
Godka Alxanka Steel shabaggeeda
Ahama Steel Bar shabaggeeda Decking
Ahama Steel Floor shabaggeeda
Steel galo Gam'ida Steel shabaggeeda
Steel Floor Platform shabaggeeda
Steel Clip shabaggeeda
Steel shabaggeeda Masar
Steel xayndaabka iyo shabaggeeda
Steel shabaggeeda Waayo daboolida Dheecaan yaamayska
Steel shabaggeeda Waayo, tareenada
Steel shabaggeeda Houston
Steel shabaggeeda Plant
Steel shabaggeeda Plateform
Steel shabaggeeda Platform
Steel shabaggeeda Platform shabaggeeda Steps
Steel Size shabaggeeda
Steel shabaggeeda la maro
Steel shabaggeeda Weight
Steel shabaggeeda Alxanka Machine
Qaab dhismeedka Steel Platform shabaggeeda
Maro Birta Bar shabaggeeda
Maro Steel shabaggeeda
Qashinka Daaweynta Biyaha Plant Platform shabaggeeda
Welded jaranjarada ku tuman Steel shabaggeeda Iyadoo saxe Plate Nosing
Welded Steel Bar shabaggeedii, Korea Steel shabaggeeda
style Plain iyo shabaggeeda steel